gị Position：Home>News>Industry News>Nku azu tube okpomọkụ Exchanger Details
Time：24 August 2016 Pịa：1146
Nku azu tube okpomọkụ Exchanger taa:
Finned tube okpomọkụ Exchanger bụ oge a na ulo oru ngwá dị oké mkpa ka okpomọkụ nyefe usoro, nke na ọtụtụ-eji niile ulo oru ubi, karịsịa na petrochemicals, nkà mmụta banyere ígwè, ike, akwa,-ebi akwụkwọ, dyeing, ihicha ndị ọzọ ọrụ. Na-adịbeghị anya, n'ihi na re-eji nke ala-carbon gburugburu ebe obibi-echebe ma na ume, na otú iji melite finned tube okpomọkụ Exchanger arụmọrụ-enweta ihe ndị ọzọ ụlọ ọrụ ntị. Ya ịrụ ọrụ nke ọma okpomọkụ nyefe arụmọrụ, ikuku (ma ọ bụ ndị ọzọ na gas) kpo oku na obi jụrụ, ebe ọ bụ na ugbu a ọ dịghị nke ndị ọzọ na okpomọkụ exchangers enwe magburu onwe arụmọrụ nwere ike dochie.
Finned tube bụ a isi mmewere esịnede ukwuu oru oma okpomọkụ Exchanger, ya àgwà na-emetụta arụmọrụ nke okpomọkụ Exchanger, omenala gburugburu mgbawa e dochie na ọhụrụ technology nhazi aluminum ọtụtụ ihe mejupụtara finned tube. Ọ na-eji mgbali-eguzogide ma na oru oma okpomọkụ nyefe arụmọrụ nke aluminum ihe onwunwe ígwè, na kọmpat, obere unit olu, okpomọkụ nyefe arụmọrụ.
Quanbang na-ọma-ahụmahụ ná nku azu tube okpomọkụ Exchanger emeputa na imewe izute gị mkpa, nakwa nku azu tube okpomọkụ Exchanger OEM ọrụ dị iji mee ka ndị kasị nwee ezi uche na ngwaahịa.
Nku azu tube okpomọkụ Exchanger nkọwa:
Nku azu tube okpomọkụ Exchanger bụ ma n'ihi na uzuoku na mmiri ọkụ usoro, adabara ma uzuoku ikuku okpomọkụ na mmiri / ọmụmụ ikuku okpomọkụ. Finned akpa, dị ka aha-apụta, mkpụrụ tube plus nku azu. Base tube nwere ike ịbụ carbon ígwè anwụrụ, igwe anaghị agba nchara, na ọla tube. N'otu aka ahụ, gburugburu na mpụga nke nku azu ihe onwunwe nwekwara ike ịbụ na dị na ọnọdụ ojiji na usoro chọrọ iji họrọ aluminum, ọla kọpa ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ.
Nku azu tube okpomọkụ Exchanger ngwa:
Bụ-eji maka na-ekpo ọkụ ikuku kpo oku, Ntụ oyi ma kpo oku usoro, ikuku ihicha ngwa, isi ngwaọrụ na-ekpo ọkụ ikuku na ngwa. Na nke ugbu a ulo oru na Ngwuputa ụlọ ọrụ, nnukwu ụlọ, ọ na-e n'ọtụtụ ebe etinyere na kpo oku na ventilashion usoro.
Nku azu tube okpomọkụ Exchanger atụmatụ:
(1) The okpomọkụ na-ajụ nwere ike ịbụ uzuoku ma ọ bụ mmiri ọkụ.
(2) iji ihe abụọ metal ihe onwunwe, mgbe ndị isi mejupụtara a oyi akwa nke aluminum tube mgbidi nchedo, mgbochi corrosion, na mberede mgbanwe okpomọkụ na vibration nwere ezi eguzogide, adịghị mfe ihihi.
(3) n'iji pụrụ iche nke jikoro iji gbochie electrochemical corrosion nchedo ngwa nju oyi tube efere.
(4) finned tube okpomọkụ Exchanger abawanye recirculating mmiri ịta ọnụego, na-ebelata tobaim condenser corrosion.
Okpomọkụ Exchanger ihe: carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, ma ọ bụ aluminum nku azu / carbon ígwè anwụrụ.
Nkọwa: iche iche ụdị, dị ka nkà na ụzụ chọrọ nke mmepụta. OEM na-nabatara.
Nzube: n'ihi na ikuku kpo oku ma ọ bụ obi jụrụ ajụ ike ga-eji jupụta uzuoku, na mmiri ọkụ, kwes mmanụ ma ọ bụ jụrụ mmiri, ice na brine.
Na Mbụ：Okpomọkụ Exchangers Market Worth $...
Osote：ọ dịghị ndekọ